बिहानै तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खानुहोस्, मिल्नेछन् यस्ता फाइदा !! | सुदुरपश्चिम खबर
मह, कागती र तातोपानीको मिश्रण सेवन गर्नाले भोक पनि कम लाग्छ । यसमा फाइबर पाइन्छ,जसले भोक र सुगर लेबललाई कम गरी पर्याप्त इनर्जी प्रदान गर्छ । यसैले नियमित रुपमा बिहान यसको सेवन गर्नाले दिनभर खाने खानामा पनि कमी हुन्छ । जसबाट तौल घटाउन पनि मद्दत मिल्छ।
यसको नियमित सेवनले शरीरको प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। मह र कागतीमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट र अन्य पोषक तत्वले मौसम परिवर्तनसंगै हुने संक्रमणबाट पनि बचाउँछ। नयाँ पुस्ता बाट सभार
जंकफूडदेखि चिसो पेयसम्मले कसरी जीर्ण बनाउँछ शरीरलाई ?
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * 36 + = 46